Last updated: badda. 28 2020 | 3 min akhri
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Showgii ah, ma sameeyo goobta ka mid ah. Waxay Ma jecli wax dadweynaha, haddii waa yar Peck. Marka aad iyaga dhunkado, ku xaraysta dhow iyo dhabarka iska taabto, taas oo ay meesha ugu xasaasi ah. Sida Virgo, calaamadaasuna og yahay sida ay si fiican u dhunkado, sidaa darteed hubso inaad ogtahay waxa aad qabanayso hor inta aysan bilaabin.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Scorpio ah, eegto indhaha ay ka hor intaadan samayn. Dhig bixi inaytaagnaan u daran, kolkaasay hoorisay for a garaaca yar. Waxa ay u noqon doonaa in si wayn. Dhunkasho laftiisu waa in dareen, laakiin ay gacanta ku hayso. Baaburka iska hor ay hesho meel aad u fog waxaa galay si ay u sii raba more.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Sagittarius ah, ka dhigi doonaan cayaar ah. Calaamad Tani ma jeclaan lahayd in aad wax qaadato aad si dhab ah, xitaa dhunkashada, sidaas darteed waxay jeclaan waxa uu ahaa markii aad ahaayeen qaar ka mid ah kid dugsiga sare samaynta baxay xagga dambe ee gaari. Dhab ahaantii, waxay noqon lahaa runtii galay in haddii aad tahay iyada aawadeed.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Capricorn ah, waxaa fikrad wanaagsan ah waxaa laga yaabaa in aad marka hore u sheegto, ama xataa Idan warsadeen. Waxay rabaan in aad si aan u muujiyo ixtiraam qaar ka mid ah. Ha ku dhunkado ee dadweynaha, hana u ha u kala daadsan ama duurjoogta ah. Waxaa Hayso fudud, oo ha ku qasbin u galay haddii aysan rabin in.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Aquarius ah, jebiyaan qaar ka mid ah farsamooyinka cusub. Calaamad Tani waa mid tijaabo ah, oo ay kusoo dhan waxay isku dayeen. Haddii aad iyaga trill karo wax ay Waligeyna ma sameynin hor, ay la gariir doontaa leh farax. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay iyaga dhunkado in dadweynaha inkastoo, sida ay gabi ahaanba nici soo bandhigo dadweynaha of Jacayl.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Pisces ah, aad doonayso inaad u sii macaan. Dhunkasho ugu horeeya xitaa laga yaabaa ay gacanta ama dhabanka halkii bushimahooda. Waxay dhalaali doonaa sida taataabtay in uu noqon doono. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in aad u dareen, Farqa, ama degdegin u galay. Waxay heli kartaa fikrado dibadeed ee madaxooda iyagoo leh haddii aad ku degdegin.